Lanonam-pamoahana ny andiany "Ainga" teny anivon'ny Sekoly ambony fampiofanana mpiasam-panjakana na ENAM | Primature
Lanonam-pamoahana ny andiany “Ainga” teny anivon’ny Sekoly ambony fampiofanana mpiasam-panjakana na ENAM
Antananarivo, 06 Aprily 2018 – Nanotrona ny lanonana namoahana ny andiany “Ainga” na “Améliorer l’INterne et la Gestion de l’Administration”, izay nanaraka ny riam-piofanana Fandalinana sy Fanatsaràna ny Fahaiza-manao (approfondissement et perfectionnement des competences) teny anivon’ny ENAM Androhibe, ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay Ray mpiahy ity andiany ity.
Raha 228 no isan’ny mpiofana tany am-piandohana dia nandalo mason-tsivana izy ireo ka ny 207 no tafita ary tonga amin’izao fizaràna mari-pahaizana izao. Misokajy maromaro ny sehatra niofanana, ao ny mahakasika ny fitantanana ny lafin-tany, ny fitantanana ny tsenam-panjakana, ny fitantanana ny fananam-bahoaka, ary ny fitantanan-draharaham-panjakana akapobeny.
Nanafatrafatra ireto andiany ireto ny Praiminisitra ny amin’ny tokony hananan’ny tsirairay vina sy fijery vaovao ho fampandrosoana ny firenena: “marina fa ilaina ny fahaizana, kanefa mihoatra noho izany ny zavatra tena ilaina amin’izao fotoana izao satria tsapa fa saika miha-mitotongana ny toe-tsaina entina manatanteraka ny asa amin’ny ankapobeny na amin’ny sehatra miankina amin’ny fanjakana na tsy miankina. Lasa manaotao foana fotsiny ny olona sasantsasany. Aza hadino fa miasa ho an’ny vahoaka ianareo, tsy mijery ny tombotsoanareo manokana intsony fa mahaiza mijery lavitra, tokony himasoantsika ny tombotsoa ambonin’ny firenena. Mahaiza manaja ny asa, manana ny “conscience professionnelle” ary indrindra ny fananana “éthique”. Rehefa hiverina amin’ny asa aman’andraikitra sahaninareo ianareo dia aza hadino ny ainga vao sy ny toe-tsaina vaovao, miasa ho an’ny vahoaka ianareo, ary aza hadino ny fanamby amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Raha samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay avy, dia handroso ity firenena ity”.
← Fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana fahaefatra
Tolo-tanana Faritra Diana →